Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. राेचक खबर – Page2– Janata Live
यती ठूलो नितम्ब तपाईले देख्नु भएको थियो !
यी महिला हुन् ३९ वर्षीया माइकेल रुफ्फिनेली । उनी विश्वमा नै सबैभन्दा ठूलो नितम्ब (हिप) भएकी महिलाको रूपमा चर्चित छिन् । ४२० पाउन्ड तौलकी यी महिलाको नितम्बको व्यास आठ फिट छ । यिनको उचाइ भने पाँच फिट छ । माथिको भाग सामान्य देखिए पनि कम्मर मुनिको भाग भने अस्वाभाविक रूपमा ठूलो देखिन्छ । नितम्वा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो भएकोमा यिनलाई कुनै दुस्ख वा अफसोस छैन् रे ! उल्टो उनी गर्व गर्छिन् । “म आफ्नो आकारलाई मन पराउछु । ‘ब्युटिफूल वुमेन’ वेबसाइटका लागि मोडलिङ पनि गर्ने रूफ्फिनेली प्रति सुटिङ एक हजार डलर कमाउँछिन् । उनका सबभन्दा ठूला फ्यान भनेका उनका पति ४०...
कन्डमको बदला पोलिथिन प्रयोग गरेपछि…
एजेन्सी – यौन सम्बन्ध बनाउने समयमा एक जोडीलाई यस्तो भयो जसको कारण अस्पताल नै भर्ना हुन परेको छ । यौन सम्बन्ध राख्ने क्रममा कन्डमको सट्टा प्लास्टिक व्यागको प्रयोग गर्दा दुवैजनाको गोप्य अंगमा गम्भीर चोट लागेपछि एकजोडी अस्पताल जान परेको हो । न्युजपेपर टुई ट्रिका अनुसार, युवा धेरै लाज मान्ने प्रकृतिका थिए र यसैकारण कन्डम खरिद गर्न सकेका थिएनन् । जसको कारण यौन सम्बन्ध राख्ने समयमा पोलिथिनको उपयोग गरे । युवा कन्डम खरिद गर्न लजाउने भएकाले दुवैजनाले गम्भीर चोट सहनु परेको हो । डाक्टरले दुवैजनालाई एन्टीबायोटिक्स र अन्य प्रकाका औषधि दिएको छ । कन्डममा लुब्रिकेन्ट हुन्छ र सम्बन्ध बनाउने क्रममा धेरै...
यौनसम्पर्क गरेर विवाहका लागि केटी छान्ने अनौठो परम्परा
सुन्दा आश्चर्य लाग्ने खालको परम्परा जहाँ छोरीलाई आफ्नो जिवन साथी रोज्न एक भन्दा बढी पुरुषसंगका यौन सम्बन्ध राख्न अभिभावकले नै उक्साउँछन् । छोरीहरुको सजिलोका लागि बुवाआमाले नै घरभन्दा केही टाढा प्रेम झुपडी बनाइदिन्छन् । यसमध्येको एउटा परम्परा कम्बोडियामा छ, जहाँ युवतीहरुलाई धेरैजना पुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो लागि उपयुक्त लोग्ने छान्ने स्वतन्त्रता छ । कम्बोडियाको क्रिउन आदिवासीहरुमा विवाहको एउटा अनौठो परम्परा रहेको छ । आदिवासी समुदायका चेलीहरु विवाह पूर्वनै आफुले चाहेका एकभन्दा धेरै युवकहरुसँग यौन सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । उक्त लभ हट अर्थात् प्रेम झुपडीमा अविवाहित छोरीहरु आफूले चाहेको युवकसँग रात बिताउन तथा सहवास गर्न समेत पाउँछन् ।...
अफ्रिकाकी यी महिलाले एकैपल्ट १० बच्चा जन्माएको खबर झुठो चर्चा
काठमाडौं– दक्षिण अफ्रिकाकी एक महिलाले हालै एकै पटक १० वटा सन्तान जन्माएको भनेर समाचारहरु आएका थिए । यो खबर सत्य भइदिएको भए उनी एकै पटक बढी सन्तान जमाउने विश्वकै पहिलो महिला हुने थिइन् । तर एकैपटक १० वटा बच्चा जन्मिएको खबर झुठो दाबी मात्र भएको र त्यो खबर असत्य रहेको एउटा आधिकारिक अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ । बीबीसीका अनुसार ३७ वर्षकी गोसियामे थामरा सिथोले १० वटा सन्तान जन्माएको खबर आएका थिए, उनले खाउटेङ् प्रान्तको अस्पतालमा बच्चा जन्माएको बताइएको थियो । तर त्यहाँका कुनै पनि अस्पतालमा त्यसरी बच्चा जन्मिएको अभिलेख नरहेको प्रान्तीय सरकारले जानकारी दिएको हो । स्वास्थ्य परीक्षणले गोसियामे थमारा...
ठुला स्तन भएकी युवतीलाई युवाहरुले घुरेर हेरे !
स्तनको आकार र यौन आनन्द के सम्बन्ध छ त ? ठुला स्तन भएकी युवतीलाई युवाहरुले धेरै बेर सम्म उनको वक्षस्थलमा घुरेर हेरेको तपाई हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ । तर किन हेर्छन् त युवाले ठुला स्तन भएका युवतीलाई ? के साँच्चीकै ठुला स्तन भएकायुवतीसँग यौनसम्पर्क गर्दा बढी आनन्द आउँछ ? स्तनको नाप वा आकारको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता वा चासो त आफ्नो यौन साथीलाई पर्याप्त हुन्छ नै । तर साना स्तन भएका युवती र ठुलाका बिचमा के अन्तर हुन्छ त रु साना हुन् वा ठुला स्तनको स्पर्शले पुरुष र महिलालाई स्तनले औधी यौन उत्तेजना दिन्छ नै । पुरा स्तन नै...
तपाईं कुन प्रकारको व्यक्ति ? यी चार चित्र हेरेर आफैँलाई चिन्नुहोस्
काठमाडाैँ – नजर (हेराई) ले बताउँछ नजरिया (विचार गर्ने वृत्ति वा ढंग) र नजरियाबाट मनको कुरा । कुरा स्पष्ट छ, यहाँ चार चित्र दिइएको छ, जसमा पहिलो नजरमा एक चित्र देखिनेछ, तर यसमा दुई छवि/चित्र घुलमिल छ । जुन छवि तपाईंलाई पहिले देखिन्छ त्यो तपाईंको नजर हो । यसका अनुसार मनाेविज्ञानको दृष्टिबाट नजर विश्लेषणमा दिइएको छ । यी आंकलनलाई हेरेर तपाईं आफ्नो मनस्थितिको केहि अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ । तर यो कुनै ठोस प्रमाण भने होइन, केवल सामान्य परीक्षण मात्र हो । सिंह— यदि सिंहको चित्र देखिन्छ भने तपाईं हरेक विषयको अन्तिमसम्म पुग्ने विश्वास गर्नुहुन्छ । र यसको लागि मनको डरसंग...
एजेन्सी– विश्वकै ठूलो हीरा सन् १९०५ मा अफ्रिकामा फेला परेको थियो । हीरा उत्खननको दायरा विश्वभर बढेपनि ११६ वर्षयता किर्तिमान भंग हुन सकेको छैन । कुलिनान डायमण्ड नाम दिइएको यो हीरा ६२१.३५ ग्रामको छ । दक्षिण अफ्रिकाको कुलिनान खानीमा भेटिएको हीरा उक्त खानीका प्रमुखको नाममै राखियो । थोमस कुलिनानको नाममा यो हीराको नाम राखियो । सन् १९०५ मा बेलायतमा हीरा विक्रीका लागि राखियो । तर, दुईवर्षसम्म कसैले खरिद गरेनन् । सन् १९०७ मा ट्रान्सभाल कोलोनी सरकारले हीरा खरिद गर्यो । बेलायतका राजा एडवार्ड सातौं सामु पेश गरेको थियो । हीरालाई जोसेफ एसर एन्ड कम्पनीले काटेको थियो । नौं टुक्रा पारिएको...
गर्भवती महिलाको पेट देखेर कुकुर भुक्न र रुन थालेपछि…
कुकुर जति वफादार हुन्छन त्यति नै समझदार पनि । कुकुरमा अनौठो किसिमको शक्ति पनि हुन्छ । घटना इंग्ल्यान्डको डोनकैस्टरको हो, जहाँ एक गर्भवती महिलाको पेट देखेर अचानक उनैले पालेको कुकुर भुक्न लाग्यो । यसपछि जे भयो त्यो महिलाले कहिल्यै भुल्न सक्दिनन् । वास्तवमा इंग्ल्यान्डकी २१ वर्षकी अलहाना गर्भवती थिइन् । एक दिन अचानक पाल्तु कुकुर अलहानाको नजिक आयो । यो भन्दा अगाडी कलिल्यै कुकुर त्यसरी नजिक आएको थिएन् । कुुकुर अलहानाको पेट नजिक आएर रुन र भुक्न थाल्यो । यसको केही समयमा नै उनलाई शरीर दुख्न थाल्यो । उनी तुरुन्तै डाक्टरको सम्र्पकमा गइन् । डाक्टरले जाँच गरेपछि उनलाई गम्भीर इन्फेक्सन...
१११ बर्षका वृद्धको दाबी– कुखुराको गिदीले धेरै बाँचे
उमेरले ७० नाघेका वृद्धहरु कमजोर हुने मात्र होइन, कतिपय बिरामी बन्न पुग्दछन् । तर अस्ट्रेलियाका सबैभन्दा वृद्ध व्यक्ति, १११ बर्षका भए तर उनी अझै पनि स्वस्थ्य छन् । रिटायर्ड पशुपालक डेक्सटर क्रूगर १११ बर्ष ५ महिनाको भए । उनी प्रथम विश्व युद्धका अनुभवी जैक लकेट भन्दा एक दिन जेठा थिए तर सन् २००२ मा उनको मृत्यु भयो । डेक्सटरले आफ्नो दिर्घ उमेर र स्वास्थ्य रहनुबारे सम्बन्धी राजको खुलासा गर्दै खानपान र जीवनशैली बारे बताएका छन् । उनका अनुसार कुखुराको टाउकोमा हुने मष्तिक खाने गरे आफु जतिकै उमेरसम्म बाचिने बताएका छन् । उनको स्मरणशक्ति अझै पनि राम्रो छ । डेक्सटरका ७४...